CAMPERIZED ဗင်ကားများ၏ တော်လှန်ရေး - THE INDIAN FACE
CAMPERIZED VANS ၏ပြောင်းလဲခြင်း
စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၄
ငှားရမ်းရန်ရွေးချယ်ခဲ့သောစွန့်စားခန်းများစွာရှိသည် camper ဗန် ဤနွေရာသီတွင်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောအစားဤ ၀ င်ရောက်မည့်နေရာများစွာကိုရွေးချယ်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုနိုးပါ၊ ပင်လယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ တောင်တန်းဖြစ်ဖြစ်၊ အစောဆုံးငှက်တွေရဲ့အသံနဲ့မဝံ့မရဲမနက်ခင်းကမင်းကိုနှုတ်ဆက်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ အပြင် သွား၍ သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလှပသောရှုခင်းကိုလေးစား။ ဝတ်ပါ ငါတို့ရဲ့မျက်မှန် သင်၏မျက်လုံးများကိုနံနက်အလင်းရောင်နှင့်အဆင်ပြေစေရန် လေပြည်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်နစ်မြုပ်နေသောမြို့၏ဆူညံသံကိုသတိမပြုမိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာခရီးသွားခြင်းနှင့်သွားရာလမ်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတို့ ... သင်ဤအရာကိုအခမဲ့ရဖူးသလား။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခြေသလုံးလူနေမှုပုံစံကတစ်ချိန်တည်းမှာအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့၊ ချိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲ။ ပြီးတော့လူတိုင်းကအရာအားလုံးကိုမှန်ဖို့နဲ့ဘာကိုမှချည်နှောင်မထားဖို့၊ ငါတို့ကရုံးကိုဆက်လာဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါတို့မရွေးဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ အားလပ်ရက်ကိုမတူအောင်သုံးမယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့အခြားများစွာ! ဤအရာအတွက်၊ ဝင်ပါ The Indian Face ငါတို့သည်ဤလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအလွန်အာရုံစိုက်ပြီးငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှကိုမင်းကိုပြောပြချင်သည်။ ဘယ်သူသိလဲ ... မင်းကဘေးနားကိုသွားမယ့်သူဖြစ်နိုင်တယ် #VanLife!
ကပ်ရောဂါ၏ကန့်သတ်ချက်များအပြီးတွင်ခရီးသွားခြင်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပို၍ မနာလိုဖြစ်လာသည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်း၏သက်တောင့်သက်သာဇုန်မှထွက်ခွာပြီးထိုနေရာများကိုစူးစမ်းလိုစိတ်ကြီးထွားလာသည်။ နောက်ခံ၌ရှိခဲ့ဖူးသော၊ စုဆောင်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ El País မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ sector ၏ခန့်မှန်းချက်များအရယခုနွေရာသီတွင်အမျိုးသား ၅၅၀၀၀ နှင့်နိုင်ငံခြားမော်တော်ကား ၁၅၀၀၀၀ ခန့်သည်စပိန်လမ်းများကိုဖြည့်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်လူအများကြီးကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ #VanLife အကြောင်းကဘာလဲ။
လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်လှုပ်ရှားမှု၏ဖန်တီးသူဖြစ်ခဲ့သည် ဖော်စတာ ဟန်တင်တန် (@fosterhunting) ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Ralph Lauren တွင်ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး အဖြစ်သူ၏အသက်စွန့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သူမှာရှစ်ဆယ်မှ Volkswagen Syncro သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ လှိုင်းစီးခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်သူဖြစ်သောကြောင့် Huntington သည် California ၏ကမ်းခြေသို့ခရီးသွားခဲ့သည် အိမ်သည်ကားရပ်ရန်နေရာဖြစ်သည် ("မင်းအိမ်ကမင်းကားရပ်တဲ့နေရာ") ။ အမှန်တရားကတော့လူတိုင်းကအရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးခြေသလုံးဘဝကိုမသွားချင်ပေမယ့်၊ အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်ကာလမှာလမ်းတွေနဲ့သဘာဝကိုအပြည့်အ ၀ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဖြတ်တောက်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့မြင်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။ ဤလူမှုရေးဖြစ်စဉ်သည်ဆက်ရှိနေမည်မှာသေချာသည်။ သင်၊ သင်ရဲရင့်ပါသလား။
CAMPERED VAN တွင်ခရီးသွားခြင်း၏အတွေ့အကြုံကိုအဘယ့်ကြောင့်ရွေးချယ်ရသနည်း။
camper တစ်ခုနှင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ရှေ့နှင့်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်မင်းကခရီးတစ်ခုတည်းမှာအများကြီးပိုတွေ့နိုင်တဲ့ ဦး တည်ရာတစ်ခုတည်းကိုပဲဘာလို့ရွေးတာလဲ။ ၎င်းသည်စိတ်နှင့်ဘဝအပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုသတိပြုမိခြင်းနှင့်ရှုထောင့်ပေါင်းများစွာ၌ဖူလုံခြင်းရှိခြင်း။ ဤမျှခရီးအတွက်အချိန်ပင်မဖြုန်းပါ။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှုအသစ်များ၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ၊ သင်၏ကြို့ထိုးခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သောစွမ်းရည်အမြင်သစ်များရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကစုံတွဲတွေအများကြီးနဲ့သူငယ်ချင်းအုပ်စုတွေကိုဒါကိုရွေးဖို့ဘာအကြောင်းပြချက်ကိုအတိအကျမသိသေးဘူးဆိုရင် camper အတွေ့အကြုံ အားလပ်ရက်တွေကိုကုန်ဆုံးဖို့ဒီမှာငါတို့မင်းကိုစာရင်းပြုစုထားတယ် အချက်အချို့ကိုထောက်ခံပါတယ် ဒါကမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသေချာပေါက်ကူညီလိမ့်မယ်။
“ camper” သည် van နှင့် motorhome အကြားပေါင်းစပ်ထားဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အသုံးအနှုန်းများကိုပထမ ဦး စွာတုံ့ပြန်သည်။ ကားမောင်းသည့်အခါကိုင်တွယ်မှုသည်၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်မှုကြောင့်ကားတစ်စီးနှင့်အလွန်တူပြီးစျေးနှုန်းများမှာယူရို ၃၇ ဝဝဝ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အခြေခံများနှင့်သူတို့၏နေထိုင်မှုပုံစံများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်များဖြစ်ပြီးမော်တာများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအဆောက်အအုံများမဟုတ်တော့ဘဲနောက်ပိုင်းတွင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ "အိမ်သုံးယာဉ်များ".
အတွင်း camper ဗင်ကားများကိုအရွယ်အစားသုံးမျိုးတွေ့နိုင်ပါသည် ငါတို့ခံစားချင်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးရွေးဖို့။ ဟိ mini camper ဖြစ်သည် ပိုအဖြစ်များတဲ့မော်ဒယ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Nissan က NV200
ဤအုပ်စုအတွင်း၌ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကားများ၏ Volkswagen ကိုသင်မှတ်မိနိုင်သည်။ Outer Banks ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ဖြစ်ရပ်များအနက်မှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သော Volkswagen Kombi Westfalia ၏ဘီးနောက်၌ဇာတ်ကွက်တစ်ခုလုံးနီးပါးရှိသည်။
ဤဗင်ကားအမျိုးအစားများသည်သင့်အားခရီးသွားလာခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ နေရာပိုရှိမှာသေချာတယ်။ သူတို့ကအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ကဘီးပေါ်မှာအိမ်နဲ့ပိုတူတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်။ ၎င်းတို့သည်မိသားစုများသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းအုပ်စုများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောယာဉ်များဖြစ်ပြီးဤကဲ့သို့သောအရာမျိုးကိုတစ်စုတစ်ဝေးတည်းနေထိုင်ခြင်းသည်အတွေ့အကြုံသည်သင်ထင်ထားသည်ထက်များစွာပိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းစေလိမ့်မည်။
campervan တစ်ခု ၀ ယ်တာကမင်းအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါစိတ်ထဲရောက်လာတဲ့ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူး #VanLife သို့ ၀ င်ပါမရ။ ငါဆိုလိုတာကစွန့်စားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အများကြီးမဟုတ်ဘူး၊ မှန်တယ်။ တိတ်ဆိတ်! ငှားရမ်းခသည်အခြားအရာများစွာအတွက်တူညီသည်။ အမှန်တော့၊ ဒီကဏ္sectorမှာပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်၊ Instagram နဲ့ကမ်းခြေတွေဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ campervan တစ်ခုမှာရက်အနည်းငယ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မင်းနဲ့ငါလိုလူတွေစုဝေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိခဲ့တယ်။ ထိုကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Feather Van သည် (@thefeathervan)ငါတို့ကအဲဒါကိုပိုမကြိုက်နိုင်ဘူး! ဒီကုမ္ပဏီကမင်းကိုငှားခွင့်ပြုတယ် မက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဗင်ကားများ သူတို့က Bahamas, Bali, Ohana, Arizona တို့လိုနာမည်တွေပေးထားကြတာဘဲ။ ထူးခြားတာကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှဖို့နဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတောင်ခွင့်ပြုဖို့ကတိပြုတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးပုံစံကအသက်ရှူတဲ့ ၀ ိညာဉ်ကိုငါတို့ချစ်တယ်။ သူတို့ကအရာအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးပြီ။ ၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့သည် သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Alba Paul Ferrer (@albapaulfe) နှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်း Lucia (@lmedrano_) ၎င်းသည် Marta Riumbao ကဲ့သို့သောအခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောခရီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။@riumbaumarta), Luc Loren (@lucloren) သို့မဟုတ် Magali Dalix (@magalidalix) ့။ ငါတို့အဖွဲ့မှာငါတို့ဘယ်နှပတ်ပိတ်ရက်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့ငါရှာနေပြီ၊ ငါမင်းကိုနောက်ထပ်မပြောဘူး။ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ ၀ က်ဆိုက်ကမင်းကိုကြည့်ခွင့်ပြုတာဘဲ သင်လိုချင်သောရက်များအတွက်မော်ဒယ်တစ်ခုစီ၏ရရှိနိုင်မှု၎င်းသည်ဗန်တစ်ခုစီ၏တိုင်းတာမှုများနှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများကိုအတိအကျသတ်မှတ်သည်။ မင်းလုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမင်းရွေးချယ်ဖို့ကမင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်၊ အဲဒီကနေအဲဒါကိုအပြည့်အဝခံစားပါ။ ဤအစီအစဉ်ကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါးစပ်များသည်မျက်ရည်များစီးကျနေသည်။
CAMPER နှင့်ခရီးသွားရန် SPAIN တွင်အကောင်းဆုံးဒေသကိုရှာရန်ဘယ်မှာလဲ။
တစ်ခုနှင့်ခရီးသွားပါ camper ဗန် ပင်လယ်သို့မဟုတ်တောင်တန်းများသို့သဘာဝချစ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။ ဆောင်းပါးအစတွင် COVID သည်လူမှုဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံအားလပ်ရက်များကိုဖြတ်သန်းရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်ဒေသခံခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စပိန်စီးပွားရေးကိုအားကောင်းစေသည်။ ငါတို့ဒီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းတွေ၊ ရာသီဥတုတွေရှိရင်ဘယ်သူကအပြင်မထွက်ချင်ဘူးလဲ။
ဖိုရမ်အမျိုးမျိုးနှင့် camper ချစ်သူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းများကဖော်ပြသည့်အတိုင်းဤအမျိုးအစားဗန်နှင့်ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးတောင်ပေါ်ဒေသများသည်ဧရိယာဖြစ်သည်။ နီဇ်, Picos က de ယူရိုပါလိဂ် y Sierra Nevadaမရ။ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်ကကမ်းရိုးတန်းထက်ပိုသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းတို့ကဲ့သို့နေရာများကိုအကြံပြုသည် Rias Baixas, Tarifa y ကော့စတာဘလန်.
ဒါတွေအားလုံးပြီးရင်မင်း #VanLife ကို ၀ င်ဖို့မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ကူးကြည့်ပါ မင်းရဲ့တိုင်းပြည်ပုံကဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲ ငါတို့ရဲ့ ဦး ထုပ်တစ်လုံး.
Camper Van ကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ။
ဗင်ကားမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်သည့်အခါ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည် လူအရေအတွက် ၎င်း၌ခရီးသွားလိမ့်မည်။ အာကာသအကန့်အသတ်မရှိသောဤခရီးကိုထွက်ခွါသောအခါ“ နှစ်နေရာ၊ အဆင်ပြေသည့်နေရာသုံးနေရာ” ဟူသောဆိုရိုးစကားအတိုင်း၊ သက်သာခြင်း ၎င်းသည်အပေါင်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုခံစားစေလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ စြေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုကဘာလဲ၊ ဒါကြောင့်မင်းကိုယ်မင်းမေးခွန်းတွေမေးဖို့ငါတို့အကြံပြုတယ် အကြိမ်ရေ camper နဲ့ခရီးသွားမလား။ ဘယ်လောက်များ ကီလိုမီတာ သင်တစ်နှစ်လုပ်နိုင်ပါ့မလား။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသောအကြောင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Spoiler: ဒီလိုပုံစံမျိုးခရီးတစ်ခုပြီးရင်မင်းသေချာထပ်ပြောချင်လိမ့်မယ်။
အခြားကဏ္ sectors များစွာကဲ့သို့စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီးအရာအားလုံးသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ camper van တစ်စီးအတွက်စျေးနှုန်းများသည် ၀ န်းကျင်ရှိသည် 15.000 နှင့် 30.000 ယူရိုမရ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အရင်အပိုင်းတွေထဲကမင်းပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ အမြဲတမ်းရှိတယ် ငှားရန် optionမရ။ ဤကိစ္စတွင်စျေးနှုန်းများသည်သင်ဗန်ကိုလိုချင်သောနေ့ရက်အရေအတွက်ပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်ကအတွေ့အကြုံကိုမကြိုက်ပါကပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန်ပထမဆုံးမော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်းရန်အကြံပြုသောဤလက်ရှိအသုံးပြုသူများသည်သံသယရှိစရာမလိုပါ။ !
လက်ရှိတွင်ယာဉ်ရပ်နားရန်သို့မဟုတ်ဗင်ကားများရပ်နားခွင့်မရှိသောကာကွယ်ထားသောနေရာများစွာရှိသည်မှာမှန်သည်။ သို့သော်အတော်အတန်လေ့လာထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့်သင်တစ်ညတာကုန်ဆုံးရန်မည်သည့်ပြသနာမှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မြို့ကြီးများတွင်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ Camper လမ်းကြောင်းသည်မက်ဒရစ်ကို ဖြတ်၍ ပါဝင်လျှင် Debod ဘုရားကျောင်း၌ခရီးဝေးကားရပ်ရန်နေရာရှိသည်၊ သင်၏ van ကိုအများဆုံး ၁၂ နာရီကြာထားနိုင်သည်။ သို့သော်လမ်းကြောင်းအများစုသည်ပေါင်းစည်းသည် စခန်းချခြင်းနှင့်တောရိုင်းစခန်းချခြင်း ထို့ကြောင့်၎င်းအားအထူးတားမြစ်ထားသောနိမိတ်ကိုသင်မမြင်ပါကသင်သည်ကြီးမားသောပြသနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Camper Van တစ်ခုပြုလုပ်ရန်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။
Camper တစ်ခုနှင့်ခရီးသွားခြင်းသည်စွန့်စားလိုစိတ်ရှိသောလူများအတွက်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်လျှင်၊ ဗင်ကားကိုကိုယ်တိုင်လုပ်သူများကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ ပြီးပြည့်စုံသောcamperizaciónကိုပြုလုပ်ပြီးယာဉ်ကိုတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဤလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ရှိရန်လိုအပ်သည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရန်အစီအစဉ်မဟုတ်ပါ) နှင့်စုစုပေါင်းစျေးနှုန်း ၎င်းသည်ယူရို ၆၀၀၀ ၀ န်းကျင်နိုင်သည်မရ။ ဒါဟာအားလုံးအပေါ်မှာ၊ မူတည်လိမ့်မယ် အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေး နှင့် ပစ္စည်းပမာဏ မင်းရဲ့အိမ်အသစ်ကိုလိုချင်တယ်။ ၎င်းကိုသင်၏အိမ်ကို“ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ” သည်ဟုမှတ်ယူပါ။
ငါတို့ဒီဆောင်းပါးမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ The Indian Face ငါတို့တိုင်းပြည်မှာနွေရာသီမှာဗင်ကားတွေမှတ်ပုံတင်တာကဒီပြန်တက်လာတာကိုငါတို့သတိထားမိခဲ့တယ်။ ဤအရာကိုမြင်လျှင်သင်သည်ပဉ္စမမြောက်အိမ်နီးချင်းနှင့်မတိုက်မိစေရန်ရက်စွဲသတ်မှတ်ချက်များတွင်သင်ကပို။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးအများကြီးကွဲပြားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဟိ နွေဦးဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စပိန်တစ်ဝိုက်ခရီးသွားလိုလျှင်စိတ်ကူးယဉ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။